Sida loo Delete Xusuusin on iPhone
Waano waa wax dadka xusuusan waxyaabaha ay u baahan yihiin si ay ugu dhibcood oo nadiif ah mar. Dad badan ayaa iska ilaawaan waxa ay ku talo jirto sameeyo haddii aan lagu waaniyo aayadaha. Waxyaabaha ay haatan beddelay oo la dadka technology cusub Xusuustaan ​​karaa waxa la sameeyo, marka la sameeyo ama waqtiga ay sameeyaan, iyo xitaa meesha loo sameeyo.
Phone kasta oo maalmahan uu leeyahay app waano dhisay waa in a. App waano Tani waxaa si gaar ah loogu talagalay dadka isticmaala in ay si fudud u xusuusan wixii la qorsheeyay ku sameynayo aan halmaamay waxay ku saabsan. App waano sida caadiga ah waxa ay taageertaa xusuusinta badan iyo waano kasta waxay leedahay horyaalka u gaar ah iyo waqti.
IPhone waxay leedahay app gaar ah waano dhisay in ay si ay u caawiyaan dadka isticmaala wadada ku sii ah waxa ay u baahan yihiin in la sameeyo iyo sidoo kale marka loo baahan yahay in la sameeyo. The waano iPhone saamaxaya kuwa isticmaala inay qarka u saaran goobta inay iyaga xasuusiso halkaas oo ay dhacdo waxaa loo qaadan meel. Waxaa kale oo ay leedahay alaarmiga oo kuu ogolaanaysaa inaad dhigay mudnaanta waxa aad u baahan tahay in la is xasuusiyo ku saabsan.
Delete xusuusinta on iPhone si toos ah
Delete xusuusinta on iPhone ka iCloud
Si joogto ah u tirtirto xusuusinta iPhone la SafeEraser Wondershare
Mararka qaarkood dadka isticmaala doonayaan in ay tirtirto waano isagoo u ah sababo kala duwan. Waxaa laga yaabaa in ay dhacdo ay doonayeen in la is xasuusiyo ku saabsan ayaa la baajiyay ama kaliya waxay go'aansadeen in ay baddalaan maskaxdooda ku saabsan. Soo saarida waano on iPhone waa u fududahay iyo tallaabooyinka waxay khuseeyaan dhammaan qalabka macruufka.
Si aad u soo saarto xusuusinta ee iPhone ah si fudud raac tallaabooyinka hoos ku qoran. Waxa jira 2 siyaabaha si ay u tagaan oo ku saabsan oo labada dhinacba ay yihiin hoose ku cad. Mid kasta oo ka mid ah hababka halkan la wadaago, ka shaqeeya dhammaataan inkastoo habka labaad loo dhakhso yahay.
Talaabada 1: ka screen guriga aad iPhone fur app Quraanka. Waxaad arki doontaa liiska xusuusinta iyo waqtiga aad u qotomiyey mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Talaabada 2: Guji Edit dhinaca gacanta midigta sare ee shaashadda. Eeg sawirka sida hoos ku siiyo.
Talaabada 3: Hadda, waa inaad heshaa shaashad la mid ah sawirka hoos ku qoran. Just ka jaftaa wareegga cas ee dhinaca waano aad rabto inaad tirtirto.
Talaabada 4: Hadda, garaac Delete in ay tirtirto waano ah.
Qaabkan ah la tirtiro xusuusinta waa ka dhaqso badan mid la soo dhaafay.
Talaabada 1: ka screen guriga aad iPhone fur app Quraanka.
Talaabada 2: weerar dadban ku waano aad rabto in aad tirtirto oo aad kooxda gacanta bidix. Hadda waxaad arki doontaa 2 fursadaha "More" iyo "Delete" by dhinaca midig ee shaashada. Tubada ku tirtirto in ay tirtirto waano ah.
Delete xusuusinta on iPhone ka iCloud.
Mana ahan wax macquul in ay ka hadlaan iPhone ama aaladaha kale ee macruufka aan ka hadlin iCloud. iCloud waa kaydinta internetka ah oo ay bixiso shirkadda Apple ee dadka isticmaala si ay u noqon kara inuu wax badbaadiyo oo uu kaydiyo xogta ay la isticmaalayo qalab macruufka. Waxay u eg tahay gurmad ah u isticmaala iPhone. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si loo badbaadiyo sawirrada, videos, fariimaha, xiriirada, taariikhda daalacanaya, xusuusinta iyo wax ka badan.
Marka aad iCloud firfircoonaan, waxaa sida caadiga ah syncs xogta aad iPhone online. Waxaad dooran kartaa waxa aad rabto iCloud si hagaagsan. Deactivating adeeg ama wax ka mid ah waxyaalihii aadan rabin iCloud si hagaagsan waxay keeni doontaa in waxa laga saaro iCloud. All in aynu doonayno inaynu u halkan ku samaynayno waa in barkinta xusuusinta ka iCloud si xusuusinta our laga tirtirayaa server iCloud ah.
Waano takhalusid ka iCloud lagu gaari karaa tallaabooyinka soo socda sida hoos ku siiyo.
Talaabada 1: fur web browser oo taga si www.icloud.com .
Talaabada 2: Nooca ID Apple iyo password aad. Riix fallaadha inay gasho.
Talaabada 3: Riix Xusuusin ka mid ah liiska Apps.
Talaabada 4: Riix wareegyada yar oo waano ah oo ayan ku jirin in ay tirtirto waano.
Wondershare SafeEraser waa codsi loogu talagalay in lagu tirtiro waxyaabaha aad iPhone iyo qalabka macruufka kale. Waxaa ugu wanaagsan ee loo isticmaalo marka aad rabto in aad ku deeqdo ama iibin aad iPhone. Xogta tirtirayaa la SafeEraser waxaa si joogto ah la tirtiro oo aan la eegayn waxa soo celin karo.
Waxaa loo isticmaali karaa si ay u nadiifiyaan photos, videos, qoraalo, sirta, xusuusinta, xiriirada, fariimaha iyo macluumaadka gaarka ah ee kale oo ku saabsan iPhone. Waxayna u shaqaysaa iyadoo dhammaan qalabka macruufka iyo bixiyaa 3 hababka nadiifinta xogta. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu nadiifiyo files junk aan loo baahnayn in aad telefoon.
Si aad u tirtiri xusuusinta ka iPhone isticmaalaya Wondershare SafeEraser sida soo socda sameyn.
Talaabada 1: Download iyo rakibi SafeEraser Wondershare. Open SafeEraser iyo xiriiriyaan iPhone si aad u computer. Haddaba, xulo "masixi tirtiray Files" .
SafeEraser falanqeeyaan doonaa macluumaadka telefoonka aad muddo dhowr miridh ah. Waxaa markaa muujin doonaa xogta tirtiray ka telefoonka, waayo, waxaad si joogto ah masixi.
Talaabada 2: Dooro "Calendar, Xusuusin" adigoo sax ku checkbox waxaa ag. Hadda, guji masixi si buuxda u masixi xusuusinta aad.
Tan waxaa sida ugu fiican loo isticmaalo marka milkiilaha iPhone uu doonayo inuu iska iibiyo telefoonka. Xogta kale ee sida farriimaha, qoraalo, iwm sidoo kale waa la tirtiri karaa sida ku cad sawirka kor ku xusan.
Sifooyinka kale ee Wondershare SafeEraser
Waxay ka soo dadajiyaa aad telefoonka ka telefoonka nadiifinta qashinka ah iyadoo la kaashanayo 1-click qalab nadiif-up la heli karo ee software-ka.
Waxa uu isticmaalaa technology milatari markii tirtiro files ka iPhone si ay marna la soo kabsaday karo.
Waxa kale oo uu leeyahay hawadda sawir in qaniinaa sawiro aad 75% oo bilaash ah ilaa meel dheeraad ah oo aad ku iPhone ah.
Waxa uu leeyahay user interface fudud iyo xawaaraha waxaa fulinaya hawlo degdeg ah waa.
> Resource > iPhone > joogto ah Delete waano on iPhone la SafeEraser Wondershare